DHAGEYSO: Madaxweyne Farmaajo oo Guddi u saaray shaqaaooyin ay ku dhinteen Ciidamo Boolis oo ka kala dhacay Baladweyne & Muqdisho – War La Helaa Talo La Helaa
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Guddi u saaray sababtii keentay dagaalkii shalay ka dhacay duleedka Mgalada Baladweyne,kaas oo ay ku dhinteen dad uu ka mid ahaa Taliyihii qeybta Booliska Gobolka Hiiraan.
Guddigaan ayaa waxa Gudoomiye loogu Magacaabay Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Bashiir Maxamed Jaamac ( Bashiir Goobe),waxaana qeyb ka ah Xeer ilaalinta maxkamadda Ciidamada, iyada oo guddigaas ay baaris ku sameyn doonaan waxaa sababay dagaalkaas.
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ahna Guddoomiyaha Guddigaas oo Warbaahinta kula hadlayay Magalada Muqdisho ayaa sheegay in Guddiga uu madaxda u yahay iyo Xeer ilaalinta Maxkamada Ciidamada ay si dhab ah baaritaano ugu sameyn doonaan si loo xaqiijiyo waxyaabihii keenay dagaalka uu ku dhintay Taliyihii qeybta Booliska Gobolka Hiiraan.
Sidoo kale Guddigaan ayaa waxaa lkoo xil saaray inay baaris ku soo sameeyaan is rasaaseyn dhawaan intii lagu guda jiray Bishii Ramadaan degmada Xamarweyne ee Gobolkan Banaadir ku dhexmartay Ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda Soomaaliya.
Ciidamada Puntland oo Howlgal Ku Qabtay Xubno Ka Tirsan Al-Shabaab